Sina 8000mm Halavany ID200mm Od204mm Carbon Fiber Tube fanamboarana sy orinasa | Yan Tuo
Fampisehoana antsipirian'ny vokatra
Ny tena tanjon'ny kibon'ny karbaona dia ny mampifangaro resina, vy, seramika ary karbonina ho fitaovana manamafy hahatonga ireo fitaovana mifangaro mandroso. Ny fitambaran-tsolika vita amin'ny kofehy karbonina dia manana tanjaka avo lenta sy modulus manokana eo amin'ireo fitaovam-pitaovana efa misy. Ny fanoherana ny hafanan'ny hafanana karbona dia laharana voalohany amin'ny fibre simika rehetra.
Ny fantsom-pitrandrahana karbaona dia manana fampiasa marobe, ary azo atao andry taolana fiaramanidina, zana-zana-tsipìka, faritra misy ny firafitry ny hazakazaka, zana-trondro, fitaovam-piadiana robotic, hazo fisoratana, sns.
Hanome fanampiana ara-teknika matihanina izahay mandritra ny dingana rehetra, ao anatin'izany ny fitandremana ny fampiasana, ny olana amin'ny fiarovana, ny fametrahana ary ny fampiasana torolàlana. Ary raiso ny andraikitra feno amin'ny olan'ny vokatra.
Teo aloha: hazo teleskaopy fibre karbaona ho an'ny pou fanadiovana varavarankely
Manaraka: Fantsona fibre karbaona ho fanaingoana